Global Voices teny Malagasy » Nahatratra dokambarotra hiandany amin’ny Huawei ny orinasa mpanao fikarohana iray · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Febroary 2021 9:19 GMT 1	 · Mpanoratra The Stand News, Neris Jonathan Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsinanana, Eoropa Andrefana, Belzika, Shina, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Andiana kaonty fako misy sary novokarina rindrambaiko nizara votoaty miandany amin’ny Huawei. Saripika avy amin’ny tatitry ny Graphika.
Ity tatitra manaraka ity dia nivoaka  voalohany tao amin’ny Chinese on the Stand News ny 31 Janoary 2021. Averina avoaka ato amin’ny Global Voices izany, araka ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Graphika, orinasa mpanao fikarohana amin’ny fandalinam-baovao, dia nahatsikaritra  fa misy andiana kaonty fako miezaka manentana ny politikan’i Belgique momba ny 5G mba hiandany amin’ny orinasa Huawei.
Nivoaka ny 28 Janoary ny tatitry ny Graphika miisa 33 pejy, ary nahatratra kaonty Twitter 14 fara-fahakeliny misandoka manampahaizana amin’ny fifaneraseran-davitra, mpanoratra, sy mpikaroka, ary mizara lahatsoratra mitsikera ny politikan’i Belgique momba ny 5G amin’ny lafiny maro samihafa, toy ny fahalalahana ara-barotra, ny fandriampahalemana, ary ny fangaraharàna. Ireo kaonty fako ireo dia manana sary novokarin’ny rindrambaiko iray antsoina hoe “Generative Adversarial Networks” (GAN), ary “bots” na kaonty fako ihany koa ny ankabeazan’ny mpanaraka azy.
Tapaky  ny Filankevitry ny Fiarovam-pirenana ao Belgique tamin’ny Jona 2020 fa hisy ireo fepetra famerana ny fampiasàna fotodrafitrasa 5G any an-toerana ho an’ireo mpandraharaha ahiana, ka mety hanakana ny Huawei tsy hahazo hampiasa vola any izany.
Na dia tsy misy aza ny porofo fa ny Huawei no tao ambadik’izao dokambarotra izao, dia hita kosa fa nozarain’ireo mpisolotena sy kaonty ofisialin’ny orinasa ireo lahatsoratra avy amin’ireo kaonty fako ireo. Nitatitra ny Graphika fa i Kevin Liu, filohan’ny seraseram-bahoaka ao amin’ny Huawei any Eoropa Andrefana, izay manana kaonty ofisialy arahin’olona 1,1 tapitrisa, dia nizara lahatsoratra miisa 60 avy amin’ireo kaonty fako ireo tamin’ny Desambra, ary ny kaonty ofisialin’ny Huawei any Eoropa, izay arahin’olona maherin’ny 5 tapitrisa, dia nizara lahatsoratra 47 avy amin’ireo kaonty fako ireo.
Mivaky toy izao ny tatitra:
Ahitàna fomba fiasa mitovy ireo kaonty fako tsirairay. Niforona tamin’ny tapan'ny volana 2017 izy ireo, saingy tamin’ny faramparan’ny taona 2020 vao nanomboka niasa. Na eo aza ny fahataràn’ny nanombohany nanoratra, dia fizaràna lahatsoratra momba ny teknolojia nosoratana tamin’ny 10 Novambra 2017 na 10 Novambra 2018 daholo ireo bitsika voalohany navoakany. (…) Amin’ny kaonty tsirairay, dia mitovy ny tenirohy sy ny tenifototra nampiasaina tamin’ny ankamaroan’ireo fizaràn-dahatsoratra, toy ny “VR” (“réalité virtuelle”), “AR” (“réalité augmentée”) na “5G”. Indraindray dia tsy miresaka momba ny teknolojia ny lahatsoratra nozarainy, izay mety midika fa nivoaka ho azy ireo fizaràna ireo fa tsy nohamarinina tsirairay.
Nahasarika ireo haino aman-jery tandrefana ny valim-pikarohana, anisan’izany ny Financial Times  sy The New York Times . Vantany vao naharay ny valim-pikarohana ny Twitter dia nofoanany avokoa ireo kaonty fako ireo.
Nanoratra momba ny iray amin’ireo kaonty fako (izay efa voafafa) i Ben Nimmo, mpikambana anatin’ny ekipan’ny mpikaroka:
Somary variana tamin’i Belgique sy ny #5G i Alexandre tato ho ato.
Indrindra ny fepetra famerana ara-pandriampahaleman’i Belgique mihatra amin’ireo mpamatsy 5G, izay Huawei sy ZTE ny lohany.
Tsy dia tian’i Alexandre ny fanapahankevitr'i Belgique.
Avy amina loharano samihafa ireo lahatsoratra nozarain’ireto kaonty fako, anisan’izany ny Politico avy ao Etazonia, ny gazety Handelsblatt any Alemaina, sy ireo vohikala toy ny eureporter.co sy dwire.eu.
Indraindray dia nivoaka avy tamina vohikala samihafa ny lahatsoratra iray. Ohatra, ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe, “5G: Raha manakana mpamatsy voafantina ny fanjakàna ao Belgique, dia iza no hizaka ny vokany?” dia nivoaka tao amin’ny london-globe.com, newyorkglobe.co, toplinenews.eu, ary eureporter.co nefa samihafa ny mpanoratra. Lahatsoratra roa amin’ireo nozarain’ny kaonty fako no voamarika fa “nandoavam-bola” tao amin’ny Politico sy itdaily.be.
Michiel van Hulten, talen’ny Transparency International ao Eoropa, dia nahatsikaritra ity andian-dokambarotra miandany amin’ny Huawei ity tamin’ny Desambra 2020 raha nikaroka tanatin’ny bitsika nandoavam-bola iray navoakan’i Mike Bai, filohan’ny paikady ara-barotra ao amin’ny Huawei any Eoropa Andrefana, izay namorona kaonty Twitter tamin’ny Martsa 2020 ary arahin’olona 885 000 amin’izao fotoana izao.
Ka indro ary ny lahatsoratra momba ny Huawei nampanantenaiko omaly. Toa mampiasa paikady miafina amin’ny tambajotra sosialy ny Huawei mba handresan-dahatra ireo mpanao lalàna any Belgique fa azo atokisana izy amin’ny famatsiana 5G. 🤨
Ny fanadihadiana nataon’i Van Hulten dia mifanojo amin’ny valim-pikarohan’ny Graphika satria ny lahatsoratra miandany amin’ny Huawei izay nozarain’i Bai dia tafiditra amin’ny nozarain’ireo kaonty fako ihany koa.
Hitan ’ny Financial Times taorian’izay fa mpiasa 6 ao amin’ny Huawei fara-fahakeliny no nahazo mpanaraka maherin’ny 10 000, herinandro vitsy monja taorian’ny namoronany ny kaontiny tamin’ny voalohandohan’ny taona 2020.
Na dia milaza aza ny fikarohan’ny Graphika fa tsy ampy ny vaovao azo mba hahafahana manaporofo fa ny Huawei no tao ambadik’izao paikady izao, dia ireo mpiasan’ny Huawei no anisan’ny nanaparitaka be indrindra ireo lahatsoratra navoakan’ireto kaonty fako ireto:
Hatreto dia ireo mpiasan’ny Huawei no nanaparitaka be indrindra ireo bitsika nataon’ireo andiana kaonty fako: izy ireo no be mpanaraka indrindra, no sady nanonona ireo kaonty fako tsirairay impolony maro.
Ho valin’izany fikarohana izany, nanambara  ny Huawei fa misy ny fanadihadiana anatiny mba hamantarana raha “nisy fitondràntena tsy mendrika.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/02/26/151594/
 January 29, 2021 : https://twitter.com/benimmo/status/1355115426821394433?ref_src=twsrc%5Etfw